သင်ပျော်ရွှင်အောင်လက်ဆောင်ပေးဖူးတဲ့သူကို တန်ဖိုးထားပါ - Tameelay
လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာ ချစ်ခင်ကြတဲ့သူတွေကြားမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သံယောဇဉ်၊ ခင်မင်မှုကိုပြသတဲ့ ချစ်စဖွယ်အမူအကျင့်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ လက်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့သူတွေဟာ စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ….
(၁) သူတို့ဟာ တစ်ဖက်သားကိုဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်
လက်ဆောင်ပေးတာဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးတာပါ။ ဒါဟာ သူတို့ကိုဂရုစိုက်လို့ဆိုတာ ပြောစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေကိုဂရုတစိုက်ရှိလို့ သူတို့ပျော်ရွှင်လာအောင် လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူရှိရင် သူတို့ဟာသင့်ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ။
လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ ဒီလက်ဆောင်ကိုရတဲ့သူပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် သေချာစဉ်းစားရပါတယ်။ သူဘာကြိုက်တတ်လဲ၊ သူ့ကို ဘယ်အရာကပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲစဉ်းစားရတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုအလေးထားမှဖြစ်မှာပါ။
လက်ဆောင်ပေးပြီး လူတစ်ဖက်သားကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးတတ်သူတွေဟာ မနာလိုစိတ်မရှိသူ၊ တစ်ဖက်သားပျော်ရွှင်မှုကို မုဒိတာပွားနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးပျော်ရွှင်မှုကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်ပြန်ရဖို့ဆိုတာထက် ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကြောင့် တစ်ဖက်သားကိုပျော်စေချင်ရုံသက်သက်ပါပဲ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ကိုယ့်မှာရှိရင်ရှိသလောက်ပေးကမ်းချင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ကြောင့် တစ်ဖက်သားပျော်ရွှင်သွားတာကိုမြင်ချင်ရုံသက်သက်နဲ့ တစ်ဖက်သားဘာကိုကြိုက်တတ်တယ်၊ ဘာလိုအပ်တယ်၊ ဘယ်အရာကိုပေးရင်သူပျော်သွားမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားတတ်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကြောင့်လူတစ်ဖက်သားပျော်ရွှင်တာကိုပဲမြင်ချင်ပြီး ကိုယ့်ကြောင့်သူတစ်ပါးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးဖြောင့်တဲ့စိတ်ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ရင် ကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေဟာ စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့သူတွေရှိရင် သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားပါ။
လကျဆောငျပေးတယျဆိုတာ ခဈြခငျကွတဲ့သူတှကွေားမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြခွငျးမတ်ေတာ၊ သံယောဇဉျ၊ ခငျမငျမှုကိုပွသတဲ့ ခဈြစဖှယျအမူအကငျြ့လေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သခြောတာကတော့ လကျဆောငျပေးတတျတဲ့သူတှဟော စိတျထားကောငျးတဲ့သူတှဖွေဈတယျဆိုတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ….
(၁) သူတို့ဟာ တဈဖကျသားကိုဂရုစိုကျတတျတဲ့သူတှဖွေဈတယျ
လကျဆောငျပေးတာဟာ ကိုယျခဈြတဲ့ခငျတဲ့သူတှကေိုပြျောရှငျအောငျလုပျပေးတာပါ။ ဒါဟာ သူတို့ကိုဂရုစိုကျလို့ဆိုတာ ပွောစရာတောငျမလိုတော့ပါဘူး။ ကိုယျခဈြတဲ့ခငျတဲ့သူတှကေိုဂရုတစိုကျရှိလို့ သူတို့ပြျောရှငျလာအောငျ လကျဆောငျပေးတာပေါ့။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ကိုလကျဆောငျပေးတဲ့သူရှိရငျ သူတို့ဟာသငျ့ကိုဂရုစိုကျတဲ့သူတှဖွေဈတယျဆိုတာ မှတျထားပါ။
လကျဆောငျပေးတဲ့အခါ ဒီလကျဆောငျကိုရတဲ့သူပြျောရှငျဖို့အတှကျ သခြောစဉျးစားရပါတယျ။ သူဘာကွိုကျတတျလဲ၊ သူ့ကို ဘယျအရာကပြျောရှငျအောငျလုပျပေးနိုငျမလဲစဉျးစားရတယျ။ ဒီလိုလုပျပေးနိုငျဖို့ဆိုတာ တဈဖကျသားရဲ့ခံစားခကျြကိုအလေးထားမှဖွဈမှာပါ။
လကျဆောငျပေးပွီး လူတဈဖကျသားကိုပြျောရှငျအောငျလုပျပေးတတျသူတှဟော မနာလိုစိတျမရှိသူ၊ တဈဖကျသားပြျောရှငျမှုကို မုဒိတာပှားနိုငျသူတှဖွေဈပါတယျ။ သူတဈပါးပြျောရှငျမှုကိုကွညျ့ပွီး ကိုယျပါလိုကျပွီးပြျောရှငျတတျသူတှဖွေဈပါတယျ။
လကျဆောငျပေးတယျဆိုတာ ကိုယျ့အတှကျပွနျရဖို့ဆိုတာထကျ ကိုယျပေးလိုကျတဲ့လကျဆောငျကွောငျ့ တဈဖကျသားကိုပြျောစခေငျြရုံသကျသကျပါပဲ။ ဒီလိုလူမြိုးတှဟော ကိုယျ့မှာရှိရငျရှိသလောကျပေးကမျးခငျြတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
ကိုယျပေးလိုကျတဲ့လကျဆောငျကွောငျ့ တဈဖကျသားပြျောရှငျသှားတာကိုမွငျခငျြရုံသကျသကျနဲ့ တဈဖကျသားဘာကိုကွိုကျတတျတယျ၊ ဘာလိုအပျတယျ၊ ဘယျအရာကိုပေးရငျသူပြျောသှားမလဲဆိုတာကို စဉျးစားတတျတဲ့သူတှဟော ကိုယျ့ကွောငျ့လူတဈဖကျသားပြျောရှငျတာကိုပဲမွငျခငျြပွီး ကိုယျ့ကွောငျ့သူတဈပါးစိတျအနှောကျအယှကျဖွဈမှာကို စိုးရိမျတတျသူဖွဈပါတယျ။ ရိုးဖွောငျ့တဲ့စိတျရှိသူတှဖွေဈပါတယျ။
ဒီအခကျြတှကေိုကွညျ့ရငျ ကိုယျ့ကိုလကျဆောငျပေးတဲ့သူတှဟော စိတျထားကောငျးတဲ့သူတှဖွေဈတယျဆိုတာ သိနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ကိုလကျဆောငျပေးတဲ့သူတှရှေိရငျ သူတို့ကိုတနျဖိုးထားပါ။
ဂန်ဓီပွောတဲ့ ကွောကျစရာကောငျးသော သူတျောကောငျး ၇ ယောကျ
မပွတျသားရငျ အကွိမျကွိမျနာကငျြရပမေယျ့ ပွတျသားလိုကျတာက တဈခါပဲနာကငျြရမှာပါ